”Heerka waxbarasho ee Puntland waa mid ka tilmaaman tacliinta dalka Soomaaliya”, wasiirka waxbarashada Puntland – Radio Daljir
”Heerka waxbarasho ee Puntland waa mid ka tilmaaman tacliinta dalka Soomaaliya”, wasiirka waxbarashada Puntland
Juunyo 23, 2013 1:54 b 0
Gaalkacyo, Jun 23, 2013- Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Siciid (Juxa) oo dib ugu soo laabtay Puntland ka dib markuu ka soo qayb galay shir lagaga hadlayay waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in shirkaasi lagu muujiyay hannaanka waxbarasho ee Puntland.
Wasiirka, ayaa tilmaamay in inta badan dhinacyadii ka qayb galay shirkaasi oo ay ugu horayso wasiiradda adeegga bulshada DF ee Soomaaliya Drs. Maryan ay isla qireen in Puntland ay ka jirto waxbarasho heerar kala duwan leh taasoo lagu faani karo, guulna ay u tahay dhamaan Soomaalida oo dhan.
Cabdi Faarax (Juxa), ayaa carabka ku dhuftay in shirkaasi faa’iido weyn ay oga soo hoyatay Puntland maadaamaa lagu soo bandhigay heerka wanaagsan ee waxbarashada ay ka gaartay Puntland Soomaalidana ay isla qirtay.
Toddobaadkii hore dabayaaqadiisii ayay ahayd markii shir looga hadlayay waxbarashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaasoo uu soo xiray m/weyne Xasan Sh Maxamuud, si weynna loogu ammaanay marxaladda tacliinta ay ka marayso Puntland.
Ugu danbeyntii wasiirka waxbarashada Puntland ayaa bulshada reer Puntland ku booriyay in kaalinta ay kaga jiraan heerarka waxbarasho ee dalka halkeeda ay ka sii wadaan, isla markaana loo sii dardar galiyo sidii waxbarashada loo gaarsiin lahaa heer ka sareeya halka hadda ay marayso si ummadda ay u gaarto barwaaqo iyo baraare.
Kulan ay ka qayb galeen ganacsatado iyo maamulka gobolka Banaadir oo lagu qabtay Muqdisho
Baahin: Sabti, 22 June 2013 – Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo